Ny lahatsoratr'i Ellen Dunnigan momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ellen Dunnigan
Miomana ara-tsaina ireo mpandidy amin'ny fandidiana. Ireo atleta miomana ara-tsaina amin'ny lalao lehibe. Ianao koa dia mila mahazo psyched momba ny fotoana manaraka, ny antso varotra lehibe indrindra na ny fampisehoana. Ny fampivelarana fahaiza-manao fifandraisana lehibe dia hampiavaka anao amin'ny sisa amin'ny fonosana. Eritrereto hoe inona avy ireo fahaiza-manao ilainao: Teknika fihainoana mahay - Tena fantatrao ve izay ilain'ny mpanjifanao ary nahoana? Inona ny fanaintainany? Mba henonao ve izany amin'ny zavatra lazainy